SEDUM (SEDUM): SHARAXAAD IYO NOOCYO UBAX CAAN AH - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Sedum, Sedum ama, sida ay caan loo yaqaan, kaabajka wuxuu ku koraa Yurub, Africa iyo America. Dabeecadda, waxaa jira in ka badan 600 nooc oo sedum ah. Waa maxay stonecrop, ugu caansan ee noocyada iyo noocyada, waxaan ku tilmaamnaa maqaalkan.
Sedum (stonecrop) cad
Warshad qoryo leh oo dhererkeedu yahay 5-7 cm oo dherer ah, waxaa laga arki karaa Aasiyada Yar iyo Waqooyiga Afrika, Cawaduusta, Galbeedka Yurub.
Caleemaha noocaan ah ayaa ku faafaya dhulka, si deg deg ahna u koraya meelaha bannaan. Gubashadu waa mid jilicsan, oo daboolan, oo gebi ahaanba daboolay caleemo cagaaran. Warshadu waxay si xad dhaaf ah u korodhaa sababtoo ah xididka ficilka ah, oo ka dhigaya natiijada dhaadheer qaro weyn.
Sedum Blooms yar yar, caddaan ama ubaxyo casaan leh ubax leh qaabka xiddigaha. Kalluunka caleenta ayaa soo jiidata shinni. Bloomoogu wuxuu dhacaa dabayaaqadii Juunyo - horraantii Luulyo. Dadka Sedum caddaan ah waxaa loo yaqaana Cawska nool, Saabuun, Bee.
Waraaq cad - geedka aan qabin. Xitaa dildilaaca dhagaxyada ayaa sabab u ah inuu noolaado. Waxay yihiin baraf u adkaysta, si fudud u qulqulaya iftiinka qorraxda, si dhakhso leh u dhufo xitaa maqnaan la'aanta qoyaanka. Natiijadu waxay ka bilaabantaa xitaa meelo qallafsan - meelaha ay ku yaalaan jejebiga iyo burburka, saqafyada iyo derbiyada.
Sedum cad - fiirin muuqaal ah. Waxa uu muddo dheer la yiraahdaa floriculture iyo wuxuu leeyahay dhowr nooc oo beerta iyo noocyo. Noocyada ugu caansan waa: (Coral Carpet), Atoum (athoum), Laconicum (Laconicum), Rubrifolium (Rubrifolium), Faro Form (Faro Form), Faransiiska (Faransiiska), Hillebrandti (Hillebrandtii).
Marar badan ma ahan Sedum ee xaaladaha degaanka. Waxay ka maqan tahay iftiinka qorraxda iyo heerkulka hooseeya xilliga jiilaalka. Xaaladahaas oo kale, stonecrop waxay leedahay stemshir cawl iyo caleemo, ku dhawaad ​​ma Bloom. Waxaa lagugula talinayaa koritaanka beerta, ee bannaanka u furan.
Sedum (stonecrop) xayawaan
Ubaxu wuxuu ka kooban yahay hal rug ah illaa 3 mitir. Wax yar ka hor ubax, caleemaha noqdaan kuwo weyn, iyo asliga ah waa dheer. Blooms Sedum caustic dhalaalaya cad jaalaha ah iyo gebi ahaanba daboolayaa geedka. Sida noocyada kale, waxay u baahan tahay ciidda dhexdhexaadka ah qallalan iyo iftiinka qoraxda.
Guryaha koritaanka waa qaybta Yurub ee Ruushka, Caucasus, Waqooyiga Ameerika, Aasiyada Yar. Casiirka soodhada leh ee xoogga leh ee xoogga leh wuxuu keenaa abuurista nabarrada maqaarka, kaas oo uu helay magaca "caustic" ama "bahal".
Marka si haboon loo isticmaalo, waxay ka caawineysaa cudurrada maqaarka badan. In dadkiisu magaciisa waa Beer Beer, Dhallinyaro, Qoryaan Xummad. In koritaanka unpretentious, si fudud u dulqaadanayaan abaar iyo dhaxan. Wuxuu jecel yahay dariiqyada qorraxda, kor u qaadista kobaca firfircoon.
Si fiican u faafin by is-seeding. Noocyada ugu caamsan waa: Aureum (Aureum), Minus (Minus), Elegans (Elegans). Waqtiyadii hore, dadka reer Rooma waxay u adeegsadeen Sedum caustic sida calool jilciye, emetic iyo anthelmintic. Ilaa hadda, waxay heshay codsi daawo dhaqameed.
Waa muhiim! Noocyada noocan ah ee stonecrop waa in lagu qaato daryeel weyn! Qiyaasta xad dhaafka ah marka la isticmaalayo faleebo waxay keeni kartaa matag, neefsashada oo dhibta iyo xitaa coma. Laguma talin carruurta iyo haweenka uurka leh.
Sedum (stonecrop) been ah
Meelaha koraya: Caucasus, Iran, Turkey. La qabsasho la'aan sii kordhaysa, laakiin wuxuu dareensan yahay in qorraxda ka fiican. In hooska ah baadiyaha baad u liitaa si liidata oo leh muuqaal quruxsan. Waxay ku dhacdaa duufaan dhagax ah iyo dushooda buuraha buuraha ah. Ubax Dheeri ah leh rhizomes elongated. Ubaxa wuxuu ka yimaadaa mid ka sarreeya barafka. Caleemaha waa lafdhaqaaq, marshaxan, midab leh, jajab-qaabeeya, marmarka qaarkood caajis ah oo jilicsan.
Inflorescence oo hoos udhaca 1-1.5 cm, Sepal waa mid toosan, casaan ama cagaaran oo gudaha ku jira. Cherry Cherry ama pinkish ah, wax yar si tartiib ah ilaa gees. Maadada yaryar waxay ka yaryihiin tufaaxa oo waxay leeyihiin casaan ama casaan. Waxuu ku jiraa bilihii ugu dambeeyay xagaaga.
Lagu yaqaan botani tan iyo 1816 Winters oo aan dhibaato lahayn, waxay si deg deg ah u koraan aag weyn oo ka adkaata noocyada daciifka ah. Maaha mid ku habboon dheriyada, maadaama ay u baahan tahay meelo badan oo qorraxda. Wanaagsan ee beerto sariirta ubaxa.
Dabeecadda, waxaa laga helaa marxaladaha, dhagaxyada iyo kaymaha leh dhirta yaryar. Waxay ku koraan meelaha bannaan ee Russia, inta badan Siberia iyo Ural, Central Asia iyo Mongolia. Noocyada cufan ee cufan ilaa 15 cm sareeya Rhizomes waxay ku yaalliin meel u dhow dusha sare, xadhigga. Jaranjir cagaaran, cagaaran, ilaa 30 cm oo dherer ah, maaha wax badan oo la barbardhigo.
Wuxuu ka baxaa illaa 3 cm oo dheer, qalajin, oo si aan caadi ahayn u cadaynaaya geesaha. Geedka stonecrop ee hybrid wuxuu ka kooban yahay midab huruud ah oo leh dhexroor oo ilaa 1 cm, stamens sidoo kale waxay leeyihiin huruud ah, leh anter orange. Kaarbooyinka ugu wanaagsan oo u adkaysta abaarta, laakiin si tartiib ah u kobcin. Noocyada ugu caansan waa Imergrunchen (Immergrunchen).
Waxaa laga heli karaa dusha sare ee buuraha Giriiga iyo Bulgaariya. Warshad yar, koraya, qaabab hoose, roogag jilicsan oo leh caleemo qarxan oo sii kordhaya. Caleemaha yaryar, cidhiidhi ah, koraan qaro weyn. Bilowga guga, ubaxu waxay cagaaraan, laakiin waxay noqdaan guduud qorraxda.
Waxay u baahan tahay ciidda dabacsan, ma si kalsooni leh u dulqaadan karin garoomada leh qoyaan badan. Warshadu ma aha muddo dheer oo kala duwan, laakiin si fiican ayaa loo soo celiyay by is-beerashada. Ku habboon aqbaarta guriga.
Sedum (stonecrop) caan ah
Sedum waa geedo ilaa 60 cm. Waxaa laga helaa waqooyiga bari ee China iyo Caucasus. Xididka tuberiformka ah, dhumucdiisana dhinaca dambe. Cirridku waa ciriiri, caleemaha ku yaala waa oval, ballaaran, midab ka cagaaran ilaa midab dufan. Ubaxku waa yar yahay, wuxuu u socdaa inflorescence size ilaa 23 cm.
Hooska ugu caansan ee ubaxa waa casaan, lilac yar. Sedum caan ah (mararka qaarkood loo yaqaan 'Elegant, Noble') Waxay jecel yihiin xilliga jiilaalka. Wuxuu jecel yahay carrada qoyan mana ka cabsanayo hooska, inkasta oo uu dareemayo inuu si fiican u iftiiminayo qoraxda. Sida caadiga ah stonecrop ilaa blooms ilaa 40 maalmood.
Inta badan blooms ilaa dayrta goor dambe, xitaa barafka hoostiisa. In sediment Eminent, ku xiran tahay hooska of midabada, soo saaro noocyo:
Ma taqaanaa? Dhammaan noocyada hoose, Sedum, oo caan ku ah midabkiisa, wuxuu ka kooban yahay walxaha ugu waxtar badan. Waxaa ka mid ah fareerka, alkaloids, glycosides iyo tiro of acids organic iyo sonkorta.
Waxaa laga helaa China, Central Asia iyo Altai. Nidaamka asaasiga ah waa la jarjaray, laamood badan ayaa la duubay. Kaabashka gaaban, ilaa 5 cm, oo leh caleemo yar yar oo caleemo ah oo ku yaal dhaladooda. Geedka ubaxa waxay ku yaalliin saldhigga, tirada yar ee tirada, min 10 ilaa 15 cm ee dhererka ah. Qiyaastii ilaa 6 xabbo, oval qaab ah, wax yar ka sareeya kor.
In qorraxda, caleemaha qaataan midab casaan-cas, ubax waa caddaan leh stamens guduud. Waxaa si fiican u soo baxaya, laakiin wuxuu ka baqayaa biyo badan barkiisa barafka. Waxay dareemeysaa ciid wanaagsan oo dufan leh oo dheecaan leh.
Wuxuu jecel yahay qorraxda, si xun u dulqaadka hooska. Waxaa la Bloomaa ee May, laakiin dayrta aad u baahan tahay si ay u gooyaa duurka u dhulka. Ma aha mid ku habboon koritaanka guriga iyo beeraha.
Waa muhiim! Gacmaha ku dhaq gacmo gashiga adoo ururinaya stonecrop. Ka hor inta aanad engegin, caleemaha waa in la dhigaa biyo karkaraya 2-3 daqiiqo, ka dib markii lagu qalajiyo heerkul aan ka sarreyn 40 °.
Guriga stonecrops - Asia Minor. Cagaarka sanadka oo dhan, warshad dilka ah, foomamka leh koritaanka geedaha cufan. Dalku wuu badan yahay, badanaa, hoos u dhiga. Ubax ilaa 0.6 cm Lugaha gaaban, hooska cagaarka ah.
Istaatiishadu waa isku mid sida tufaaxa, cherry cad. Dharbaaxadu waa kuwo toosan, wax yar ka yar tufaaxa. Marka bislaado, casaan u rog. Bloomsiyada July.
Inta lagu jiro kobcitaanka wuxuu sameeyaa rooga cufan. Dareenka ugu fiican ee hooska caadiga ah, oo leh qoyaan dhexdhexaad ah. Ubaxa uma dulqaadanayo abaar iyo inta badan blooms sida stonecrop ee beerta on sariiraha roogga. Qaybaha hoose qaarkood waxay gaari karaan dherer ka badan 30 cm oo kala-bax ah bartamaha Juun ilaa 40 maalmood.
Ma taqaanaa? Ubax "kaabajka lafaha" ee Ruushka ayaa sidoo kale loo yaqaannaa xargaha. Haddii aad caleemaha wada xajisid, waxaad maqli kartaa muuqaalka jilitaanka.
Tixraacyada ugu horreeya ee stonecrop ee lozovidnogo ka yimid Shiinaha iyo Japan. Dalalka leh jawi khafiif ah waxaa loo tixgeliyaa caws. A warshad dilka ah oo leh height ah ilaa 25 cm iyo inflorescences dhuuban nodal.
Caleemaha waa la jarjaray, calaamadeyn, illaa 1.5 cm dhererka, ubaxyada ayaa si aan habooneyn loogu diyaariyey, shan-leaved. Petals leh dhexroor ah oo ah 1 cm, huruud ah, oo leh dhamaadka fiiqan.
Waxaa jira 10 stamens, kuwaas oo ka gaaban dhirta, carpel carapels, ilaa 0.6 cm Muddada ubaxyada laga bilaabo May ilaa June. Waxay u fidisaa ciidda bacrin ah leh qoyaan dhexdhexaad ah. Si xun u dulqaadan jiilaalka of dhexe ee Russia, laakiin guga waxay u koraa si dhakhso ah. Goobiddu waxay hoos u dhigi doonaan hooska ama hoosta hoose, si xun u dhinta abaarta. Wanaagsan ee dhirta guriga.
Fiirinta aragtida waxaa ka mid ah tiro badan oo kala duwan. Sidaa darteed, florist xiiso leh si fudud u doorto warshad si uu jecel yahay.